Izindololwane ezishukiwe. Indlela ayibulale?
Ake sibheke esifanayo, ngenxa yalokho okuvela izindololwane amnyama. Ngokuvamile into enjalo ibonisa ukunakekelwa kwesikhumba okungalungile, kodwa noma kunjalo kumele kudlule luhlolo olunzulu. Njengoba yaziwa, isimo isikhumba ngenxa isimo umzimba wonkana, ngakho izindololwane amnyama kungaba uphawu ukwephulwa ezikhona.
Skin kungenzeka mnyama ngenxa esingamahlalakhona adrenal. Iningi ngokuvamile, lesi sifo kwenzeka kwabesifazane, ke ikani inhlamvu ukuthuthukiswa Hyper-lesikhumba, zibuthuntu izinwele nezinzipho, kanye izinguquko isikhumba isimo. Lokhu zokugula kudinga ezelaphayo. Lapho ethola amalungiselelo zokulungisa kanye isikhumba ukunakekelwa indololwane umbala omnyama iphele. Nokho, uma isimo sibi, ngaphezu kwalokho, kufanele ukwazi ukusebenzisa i-bleach.
Futhi, izindololwane amnyama avele izifo endocrine. Ukungondleki, izimo abampofu kwemvelo kanye nokukhuluphala ngokweqile zibulale kahle umzimba. Mina angikwazi ukwenza ngisho lapha ngaphandle kokuphazamiseka e isigqi umsebenzi nezindlala endocrine. Ezimweni ezinjalo, futhi, kudingeka usizo uchwepheshe.
Izindololwane umbala omnyama kungenzeka ngenxa yokuntuleka emzimbeni amavithamini E futhi A. banesibopho ubuhle futhi impilo kwesikhumba. Lapho lezi zinto bantule isikhumba kungase crack, amnyama futhi yomile. Lahla isifo kungenzeka esebenzisa zokusebenza uwoyela esekelwe lamavithamini.
Uma umuntu uqaphela ukuthi izindololwane layo elimnyama, ukuthi benzeni kulesi simo? Kunconywa ukuba aye kudokotela, njengoba sekushiwo ngenhla. Ungase futhi iphendukele ezinye izindlela ethandwa yokuqeda lesi sifo.
Omunye amathuluzi efanele esimweni esinjalo, kuba Scrubs zemvelo. Ziyakwazi kulula ukulungiselela ekhaya. Ungasebenzisa okukodwa kokukhethwa kukho ngezansi. Eyokuqala ihilela ukuxuba ngezabelo alinganayo uLwandle Lukasawoti kanye ukhilimu, kwesibili - soda insipho (ngezabelo nazo okufanayo). Ukwakheka kumele usetshenziswe kuya izindololwane futhi uhlikihla kubo. Phinda le nqubo kabili ngesonto. Ngokusetshenziswa enjalo ejenti zohlelo isikhumba amaseli, kuthuthukisa ukugeleza kwegazi futhi umzimba, kanye isikhumba kuba amelana ezihlukahlukene negative izici kubathinta ezithinta ngaphandle.
Ungasebenzisa uwoyela ekulungiseni le nkinga. Ingxube ibhilikotsi, peach kanye omnqumo amafutha kuyadingeka ukuze ungeze amathonsi ezinhlanu ezibalulekile amafutha we-lavender, itiye esihlahleni futhi zikagamthilini.
imiphumela emihle kufanele buso ulamula. Juice Its is kahle Khanyisa ngombani mnyama isikhumba izindololwane. Naye uhlanganise glycerin, ukhilimu omuncu noma uju. Sebenzisa leli thuluzi kufanele abe ngaphezulu izikhathi ezimbalwa ngesonto. Kufanele kuqashelwe ukuthi ijusi lemon bome esikhumbeni, kodwa kahle whitens ke. Ngakho-ke, uma ufuna nje siphungule isikhumba, kuba ngazozonke izindlela. Uma isikhumba esomile kanye / noma zibe maholoholo, ijusi lemon kumele usetshenziswe ngokucophelela, njengoba amashidi kungaba ngokuphawulekayo isimo sibe sibi isimo.
Buso ebusweni mhlophe - ikhaya zokupheka
Ubhontshisi obusha: ukupheka zokupheka nokubuyekezwa. Ukupheka zokupheka ebusika
I-Halva: inzuzo nokulimala kwalo mkhiqizo
District of Rostov-on-Don: incazelo emfushane